Tag: zvakabatana | Martech Zone
Kana usati waedza izvozvi, pamwe nharembozha iyo yandave kunakidzwa kwazvo gore rino iri Reface. Iyo mobile application inokutendera iwe kutora kumeso kwako uye kutsiva kumeso kwechero ani mune imwe pikicha kana vhidhiyo mukati me database yavo. Nei Ichinzi Inzi Yakadzika? Deepfake mubatanidzwa wemazwi ekuti Kudzidza Kwakadzika uye Fake. Deepfakes inowedzera kudzidza kwemuchina uye huchenjeri hwekunyepedzera kushandisa kana kugadzira zvinoonekwa uye odhiyo zvemukati nazvo
Kana iwe wanga uri chikamu chenharaunda yedu kwechinguva, iwe unoziva kuti tinoda zvakadii Mafomu eGiravhiti ekuvaka fomu uye kuunganidzwa kwedata muWordPress. Ingori chikuva chakajeka. Ini munguva pfupi yapfuura ndakabatanidza Mafomu eGravity neHubspot yemutengi uye inoshanda nemazvo. Chikonzero chakakosha nei ndichisarudza Mafomu eGiravhiti ndechekuti iri kunyatso chengetedza iyo data munharaunda. Zvese zvinosanganiswa zveGravity Fomu zvinobva zvapfuudza iyo data kune iyo